Mid kamid ah ergadii soo dooratay Mahad Salaad oo lagu dilay magaalada Muqdisho. | Arrimaha Bulshada
Home English News News Mid kamid ah ergadii soo dooratay Mahad Salaad oo lagu dilay magaalada Muqdisho.
Mid kamid ah ergadii soo dooratay Mahad Salaad oo lagu dilay magaalada Muqdisho.
Bulsha:- Faah faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil saaka ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo dilkan ay geysteen kooxo Bistoolado ku hubeysan.
Sida wararku sheegayaan, dilka waxa uu si gaar ah uga dhacay xaafadda Daallo ee degmada Howlwadaag, waxaana marxuumka la dilay oo lagu magacaabi jiray Warsame Ismaaciil uu kamid ahaa ergadii soo dooratay Xildhibaan Mahad Salaad oo dhawaan loo magacaabay taliyaha cusub ee NISA.
Dad goob joogayaal ah ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in marxuumka la toogtay aroortii hore ee saaka xili uu ka soo baxay hoygiisa, wuxuuna u socday goobtiisa shaqo, rasaasta ayaa ka haleeshay qeybaha sare ee jirka, taasoo sababtay inuu isla goobta ku geeriyoodo.
Ehelka marxuumka ayaa sheegay inuu maalmihii la soo dhaafay uu la kulmayay hanjabaado uga imanay kooxo tilifoono ka soo wacayay, iyadoo uu kamid ahaa mas’uuliyiinta xarunta ganacsi ee Som Oil oo xarunteeda ugu weyn ku taalo nawaaxiga isgoyska KM4 ee magaalada Muqdisho.